प्रहरी महानिरिक्षक खनालले दिए यस्तो प्रतिवद्धता, अब केहि होला कि देशमा! – PathivaraOnline
Home > समाचार > प्रहरी महानिरिक्षक खनालले दिए यस्तो प्रतिवद्धता, अब केहि होला कि देशमा!
प्रहरी महानिरीक्षक खनालले जुनसुकै प्रकृतिको हिंसा अनुसन्धानमा लापर्बाही नगरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । महिला बालबालिका हिंसा अनुसन्धानमा शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्नेमा जोड दि“दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ‘जानेरै लापर्बाही गर्नेलाई क्षमा दिइने छैन,’ राजधानीमा मंगरबार आयोजित ‘लैंगिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जाल समितिको परिमार्जित कार्य सञ्चालन’ गोष्ठीमा उनले भने, ‘अपराध नियन्त्रण गर्नकै लागि प्रहरी–समुदाय साझेदारी कार्यक्रम ल्याएका हौं ।’
कार्यक्रम सफल कार्यान्वयन भए समाजमा हुने जुनसुकै प्रकृतिका हिंसामा कमी आउने उनको दाबी छ । प्रहरीले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसामा ८७ प्रतिशत सफल अनुसन्धान गरेको बताउँदै खनालले यसबाट मात्र भने अनुसन्धान पूरा नहुने स्पष्ट पारे ।
प्रहरीबाट हुने हरेक क्रियाकलापमा महिला सहभागितालाई प्राथमिकता दिइएको विश्वास दिलाउ“दै महानिरीक्षक खनालले संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनमा प्रतिनिधित्व हुने प्रहरी जनशक्तिमा महिलाको मात्र छुट्टै्र मिसन व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको जानकारी पनि दिए ।
काठमाडौं महानगर उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा रोकथामका लागि पहिले व्यक्ति स्वयं सुध्रिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा लामो समय सक्रिय सुलोचना श्रेष्ठले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा नियन्त्रणमा ८ वर्षदेखि एडीबीले नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गर्दै आएको बताइन् ।
उनका अनुसार सन् २०१० मा जुम्लाका ३० गाउँविकास समितिबाट सुरु अभियान अहिले २० जिल्लामा सञ्चालित छन् ।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्कर कार्की र प्रहरी नायब महानिरीक्षक हरिभक्त प्रजापतिले प्रहरीले सीमित स्रोतसाधनबीच हिंसा न्यूनीकरण तथा रोकथाममा प्रशस्त काम गरेको उल्लेख गरे । दुई दिन चल्ने गोष्ठीमा ७७ वटै जिल्लाका प्रहरी कर्मचारी सहभागी छन् ।
दुःखद ९ जनाकाे दानवी नरसँहारकाे शँका उपशंका यसरी सकियो, हत्याराकाे पहिचान खुल्यो!